Ibhekwe ngabomvu inkulumo kaMengameli – LIVE Express
Abantu baseNingizimu Afrika bazobe bebheke ngamehlo abomvu ukuthi izobe iqhuketheni inkulumo kaMengameli wezwe uMnumzane Jacob Zuma azoyithulela isizwe, i-State Of the Nation Address (SONA), mhla ziyi-11 kuFebhuwari 2016, ngehora lesikhombisa kusishlwa.
Le nkulumo iza esikhathini lapho iNingizimu Afrika ibhekene nezinselelo ezeningi nokwenza abahlaziyi baqagule ukuthi unyaka ka 2016 kuzoba ngonzima kakhulu kuleli.
Phakathi kwezinye zalezi zinselelo kubalwa amandla eRandi alokhu eshone phansi njalo uma liqhathaniswa nezimali zakwamanye amazwe .
Okunye okuphinde kwenze isimo sibe nzima kakhulu isomiso esichazwa njengesibi kakhulu emlandweni wakuleli nesesiholele ekutheni abanikazi bamapulazi balahlekelwe inzuzo kanti nemfuyo ifa mihla namalanga ekubeni naleyo ephilayo ibukeka ishayeke kakhulu egazini ngenxa yendlala.
Lokhu sekube nomthelela omubi entengweni yokudla kuleli njengoba ilokhu ikhuphuke njalo ikakhulukazi inyama ebomvu kanye nempuphu.
Ngakolunye uhlangothi leli zwe libhekene nokuswelakala kwamathuba omsebenzi kanjalo nomnotho okhulu kancane. Phezu kwalokhu sekuqagulwe ukuthi mininingi eminye imisebenzi esazolahleka ngenxa yesimo sezomnotho.
Kubhekwe ngabomvu nokuthi i-Economic Freedom Fighter (EFF) angeke yini ikuphazamise ukuthulwa kwe-SONA njengoba isikubeke kwacaca ukuthi uma uMengameli engachazi ukuthi kungani ahoxisa lowo owabe engungqongqoshe wezezimali uMnumzane Nhlanhla Nene.
Ngonyaka wezi-2015 kwasuka esinamathambo ephalamende ngaphambi kokuba uMengameli athule i-SONA ngemuva kokuthi i-EFF yafuna ngo dli ukuthi uZuma aphendule ukuthi uzoyikhokha nini imali eyasetshenziswa ngenkathi kulingiswa ezokuphepha emzini wakhe oseNkandla.
Izakhamuzi zakuleli zinezifiso ezehlukene ngokuthi yini ezingathanda ukuthi uMengameli akhulume ngayo. Kodwa-ke labo abangahambisani nobuholi bukaZuma bathi ayikho enye into engabathokozisa engashiwo uMsholozi ngaphandle kokuthi athi useyahoxa esikhundleni.